Charlie Leib, NAB Show News မှစာရေးသူ 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » Author Archives: ချာလီ Leib
Author Archives: ချာလီ Leib
SSL သည်အသံနည်းပညာဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲကို CRAS ကျောင်းသားများအား Ariz ။ Campus မှဂီတကျောင်းတွင်တင်ပြသည်
Gilbert, Ariz, မတ်လ ၃၀ ရက်၊ ၂၀၂၀ - Solid State Logic နှင့် Recording Arts & Science of Conservatory '(CRAS; www.cras.edu)၊ အင်ဂျင်နီယာပညာအတွက်အဓိကကျသောအဖွဲ့အစည်းသည်ရှည်လျားသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်အလုပ်လုပ်သည့်သမိုင်းရှိသည်။ Solid State Logic ၏အနောက်ဥက္ကPresident္ဌဂျော့ခ်ျဟော်တန်လာရောက်လည်ပတ်သည့်အခါမကြာမီကဤပူးပေါင်းမှုသည်အသံအင်ဂျင်နီယာများ၏နောက်သီးနှံများကိုပညာပေးရေးတွင်ရှေ့သို့တက်လှမ်းခဲ့သည်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၁ Open House အတွက် CRAS ဘွဲ့ရသုံး ဦး သည်ဇန်နဝါရီ ၃၁ ရက်၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၂ ရက်၊ လက်ရှိ CRAS ကျောင်းသားများအတွက်ဂီတ၊ ဂီတ၊ ဂီတမှတ်တမ်းတင်ခြင်းအနုပညာနှင့်သိပ္ပံဆိုင်ရာကွန်ဖရင့်တွင်ပါ ၀ င်မည်ဖြစ်သည်။ (CRAS; www.cras.edu)၊ အသံအင်ဂျင်နီယာပညာအတွက် ဦး ဆောင်သောအဖွဲ့အစည်းသည်၎င်း၏ Gilbert အတွက်တံခါးများကိုဖွင့်ပေးလိမ့်မည်။
အမေရိကန်လေတပ်တိုက်ရိုက်အသံအင်ဂျင်နီယာ / CRAS ဘွဲ့လွန်ဇူလိုင်လ 13 CRAS ပွင့်လင်းအိမ်မှာဆွဲဆောင်ရန်
Gilbert, Ariz, ဇွန်လ 27, 2019 - မှတ်တမ်းတင်ဝိဇ္ဇာ & သိပ္ပံ (CRAS; www.cras.edu) ၏ Conservatory ။ , အသံအင်ဂျင်နီယာပညာရေးများအတွက်ဦးဆောင်အဖွဲ့အစည်း၎င်း၏ Gilbert, Ariz မှတံခါးဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မည်ကျောင်းဝင်း (1205 N ကို။ ။ အလားအလာကျောင်းသားများ, မိဘ, စနေနေ့တွင်မီဒီယာမှ Fiesta Blvd. ), 13am ကနေဇူလိုင်လ 10 - 4pm ။ သူသည် 2005 grad Josh Voyles အပါအဝင်ဘွဲ့ရ, CRAS ...
STEVENSVILLE, Md, ဇွန်လ 26, 2019 - ။ ဗီဒီယိုတောင်ပေါ်မှာကုန်ပစ္စည်းများ (videomount.com), အထုတ်လွှင့်မှုအတွက် mounting ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဦးဆောင်ပေးသူ, လုံခြုံရေး, စီးပွားရေး, CI, လူနေအိမ်များနှင့်လိုလားသူ Audio / Video စျေးကွက်၎င်း၏ 27U ကြေညာဖို့ဂုဏ်ယူဖြစ်ပါသည် နှင့်၎င်း၏ရေပန်းစားကြမ်းပြင်ထိန်သိမ်းပူးတွဲများအတွက် 42U cable ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုရွေးချယ်စရာယခုရရှိနိုင်ပါသည်။ "ပူးတွဲခုနှစ်, ဝါယာကြိုးအဖွဲ့အစည်းကတစ်ဦးမဖြစ်မနေဖြစ်ပါတယ်" ဟု Keith Fulmer, ဗီဒီယို၏ဥက္ကဋ္ဌကရှင်းပြသည် ...
Gilbert, Ariz, မေလ 9, 2019 - မှတ်တမ်းတင်ဝိဇ္ဇာ & သိပ္ပံ Conservatory ။ (CRAS; www.cras.edu) ကျောင်းသားများကို On-site နေစဉ်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အလွန်အကောင်းဆုံးအသံအင်ဂျင်နီယာများနှင့်ထုတ်လုပ်သူများအနေဖြင့်သင်ယူဖို့ထိပ်တန်းကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းအခွင့်အလမ်းများရှိသည်ဖို့ဆက်လက် အစစ်အမှန်အချိန်ပါ။ သူတို့ကအစကပင်အချို့သောပညာရှင်များသေးနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်အခွင့်အလမ်းရှိခဲ့ကြပြီမဟုတ်သစ်ကိုစက်မှုလုပ်ငန်းနည်းပညာများအပေါ်လေ့ကျင့်ရ။ အများစုမှာမကြာသေးမီက ...
Vancouver, ရေချိုး, မေလ 3, 2019 - ။ 64 အသံ, ဓလေ့ထုံးစံနဲ့တစ်လောကလုံးမထိုက်မတန် In-နားကိုမော်နီတာ (IEM) တွင်ခေါင်းဆောင်၎င်း၏ကြားနာကျန်းမာရေးပဏာမခြေလှမ်းကိုကြေညာဖို့ဂုဏ်ယူသည်။ ဒါကြောင့်လုပ်နေတာခုနှစ်, မေလ 1-31, 2019 ကနေ, ကအများဆုံးထုံးစံ IEMs (တက် A199t နှင့်ဝယ်ယူနှင့်အတူ (က $4တန်ဖိုးကိုအထိ) ထုံးစံ earplugs တစ်ဦးအခမဲ့ set ကိုကမ်းလှမ်းလျက်ရှိ၏ချွတ် 50 ရာခိုင်နှုန်းက ...
ပုံရိပ်စာတန်း: (လက်ဝဲ - လက်ယာ) Blake က Tally ကို (ပလက်တီနမ် Tools များအရှေ့ပိုင်းဒေသဆိုင်ရာအရောင်းမန်နေဂျာ); ဘရုစ်စမစ် (နယူးယောက်မြို့စက်ရုံအရောင်း); Lee က Sachs (ပလက်တီနမ် Tools များကသမ္မတနှင့်အထွေထွေမန်နေဂျာ) ပလက်တီနမ် Tools များမကြာသေးမီက Las Vegas မှာ, Nev အတွက်၎င်း၏နှစ်ပတ်လည်အရောင်းအစည်းအဝေးတွင်တစ်နှစ်တာ၏၎င်း၏ကိုယ်စားလှယ်များကြေညာခဲ့သည်။ ကွယ်လွန်သူဂျယ်ရီဖြစ်တဲ့ Warner ပြီးနောက်အမည်ရှိ "ဖြစ်တဲ့ Warner ဒိုင်းဆု", နယူးယောက်မြို့စက်ရုံအရောင်းမှချီးမြှင့်ခံရအတူ။ NEWBURY ...
အခုတော့ SKAA-Enabled Dillinger Labs က Helix ကြိုးမဲ့နားကြပ်သင်္ဘော
ပုံမှန် 10 နာရီဘက်ထရီဤအမြင့် Fidelity နားကြပ် Long ကစတူဒီယိုနှင့် Live အသံပတ်ဝန်းကျင် EDMONTON, အယ်လ်ဘာတာ, ကနေဒါ, ဧပြီ 4, 2019 အတွက် Sessions နားထောင်ခြင်းများအတွက်စံပြများမှာ - အချောင်းမြောင်းကျော်ပါ! ထုတ်လွှင့်မှုအတွက်ကြိုးမဲ့အသံက Eleven အင်ဂျင်နီယာ, Inc (www.elevenengineering.com), ဆီမီးကွန်ဒတ်တာထုတ်ကုန်စျေးကွက်ခေါင်းဆောင်, Pro ကို AV စနစ် / MI အိမ်ပြဇာတ်ရုံ, Multi-အခန်းခရီးဆောင်, 12 Volt (ကား, ထရပ်ကား, မော်တော်ဆိုင်ကယ်, ပါဝါ။ ..
1 ၏စာမျက်နှာ 1012345 » ...နောက်ဆုံး»